အလွှာခြားတိုင်း ဖီးငုတ်နေတတ်တဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ | သိလိုရာမေး
နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမယ် အလွှာခြားတိုင်း ဖီးငုတ်နေတတ်တဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့
ကျွန်တော်ကတော့ ဇော်မောင်ပါ… အသက်ကတော့ ၂၇ နှစ်… ကျွန်တော့်ကောင်မလေးနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က နှစ်ဦးသဘောတူ Living Together နေကြတာ ၁ လလောက်တော့ ရှိပြီ။ ကျွန်တော်ရော သူရောက ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုယ်စီ ဦးစီးနေကြသူတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တွေ့ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သဘောကျကြတယ်… သမီးရည်းစားဘဝရောက်ကြတယ်… အဲ့ကနေ တဆင့်တက်ကြတဲ့ သဘောပဲ! ၂၁ ရာစုလေဗျာ… My Body My Choice မဟုတ်ဘူးလား?အရင်တုန်းကတော့ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဖူးပေမယ့် အခု ကျွန်တော်က ချစ်သူနဲ့ Living together ဆက်ဆံရေးဆိုတော့ အတည်တကျလို့ပြောလို့ရတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် တစ်အိမ်တည်းနေပြီး အတူစား၊ အတူသွား၊ အတူလာ…. အဲ… အတူအိပ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ… ပြောရမယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ပြုထားတဲ့သူတွေနဲ့ ထူးမခြားနားပါပဲ။ လင်မယားတွေလို ကျွန်တော်တို့လဲ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုရှိနေပြီဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်မရဖို့ကိုလဲ သူနဲ့ အစကတည်းက တိုင်ပင်ကြတာပေါ့။ တစ်ခုရှိတာက သူ့မှာ ဟော်မုန်းဓာတ်မတည့်တဲ့ ပြဿနာရှိတော့ မိန်းမတော်တော်များများ သုံးကြတဲ့ သားဆက်ခြားဆေးတေွ သူက သုံးလို့မရဘူး။ အဲ့တော့လဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ပထမတူတူနေတဲ့ ၆ လမှာ အတူနေတိုင်း ကျွန်တော်ပဲ ကွန်ဒုံးသုံးမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်လေ… နောက်မှ သူ့ဘာသာသူ ဟော်မုန်းမပါတဲ့ သားဆက်ခြားနည်း သုံးချင်လဲ သုံးပေါ့။
ပြဿနာက ခုမှစမှာ။ ခုတလော ကျွန်တော် သူနဲ့အတူနေတိုင်း ကွန်ဒုံးသုံးရတာကို ဝန်လေးနေမိတာ… အကြောင်းအရင်းက အလွှာခြားထားရင် သူနဲ့ကျွန်တော့်ကြားမှာ တခုခုပဲ ခံနေသလိုလို… အတူနေတဲ့အချိန်ကြာလာရင် ပူလာတာမျိုး! အဲ့လိုမျိုးတွေ စဖြစ်တာ ကြာလာတော့ ကျွန်တော် သူနဲ့ အတူနေရမှာတောင် စိတ်သိပ်မပါတော့ဘူး… ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း အိမ်ထောင်သည်တစ်ယောက်ကို မေးမြန်းကြည့်ရတာပေါ့… ဘာဖြစ်တာလဲ ဆိုပြီး!အဲ့တာနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ကလဲ အိမ်ထောင်ဦးအစမှာ ကွန်ဒုံးပဲ သုံးခဲ့တော့ အဲ့လိုမျိုး တခါတလေဖြစ်တယ်တဲ့…
သူပေးတဲ့ အကြံက ကွန်ဒုံးအမျိုးအစား အမှတ်တံဆိပ် တစ်မျိုးတည်းကို စွဲသုံးနေတာထက် စိတ်အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင် တခြားတံဆိပ်တွေကိုလဲ စမ်းသုံးကြည့်ဖို့! ဒီကောင်ပြောတော့လဲ ဟုတ်သား! ကျွန်တော်က ကွန်ဒုံးတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ သုံးနေတာကြာပြီဆိုတော့လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ တွေးမိတယ်ပေါ့! ပြီးတော့ သူက ညွှန်လိုက်သေးတယ်… MOJO Air ကွန်ဒုံးကို စမ်းသုံးကြည့်ပေါ့တဲ့… ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ဒီနေ့က သောကြာနေ့လဲ ဆိုတော့ MOJO Air နဲ့အတူ TGIF လုပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ စိတ်ထဲ တေးထားလိုက်တယ်။
ဒီကောင်ညွှန်တဲ့ MOJO Air ကွန်ဒုံးက ဟန်တော့ ကျသားဗျ… ကျွန်တော်သုံးကြည့်တော့ သူက MOJO Air ဆိုတဲ့အတိုင်း ပေါ့ပါးပြီး သာမန်ကွန်ဒုံးတွေထက် နူးညံ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ အတူနေချိန်ကြာပြီး စွတ်ထားတာ ကြာလို့ ပူတာ… နေရခက်တာမျိုးတွေ လုံးဝမရှိဘူးဗျ… ပြီးတော့ တခြားကွန်ဒုံးတွေထက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုပါးတဲ့အတွက် အလွှာခြားရင် ကမ္ဘာခြားသလို ဖြစ်နေတာမျိုး လုံးဝမရှိတာက သူ့ရဲ့ အားသာချက်ပဲ… ဒီတော့ ကျွန်တော့်ချစ်သူနဲ့လဲ ပိုနီးကပ်သလို ခံစားရပြီး ခံစားမှုတွေ မြင့်တက်စေတာပေါ့ဗျာ…
ဒါကြောင့်မို့လို့ ဘော်ဒါတွေထဲမှာ ကွန်ဒုံးသုံးရင် ကျွန်တော့်လို ပြဿနာမျိုးရှိနေတဲ့သူတွေရှိရင် MOJO Air ကို စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ အကြံပြုချင်တယ်ဗျာ။ ခုဆို ကျွန်တော်တော့ MOJO Air ကွန်ဒုံးနဲ့ တော်တော် ဟန်ကျနေပြီဗျို့…